बच्चाको तौल घट्नु र बढ्नुको अर्थ के हो ? कस्तो अवस्थामा डाक्कटरको सल्लाह लिने ?
11 संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार जन्मदा बच्चाको तौल करिब ३ किलो हुनुपर्छ । तौल तीन महिनामा ५ किलो, ६ महिनामा ६ किलो, ९ महिनामा ७ किलो र एक वर्ष पुग्दा १० किलो हुनुपर्छ । कहिलेकाँही तेस्रो र छैठौं महिनामा बच्चाको तौल घटेको पनि हुनसक्छ । तर बच्चाको तौल थोरै घट्दैमा चिन्ता लिनुपर्दैन ।
तौल घट्नु र बढ्नुको अर्थ
बच्चाको निरन्तर एउटै तौल हुदैन । राताराता केही तौल बढेको बच्चा एक दुई दिनपछि घट्न केही सक्छ । अर्थात उसको तौल बढ्नु र घट्नु सामान्य हो । थोरै तौल घटबढ हुदैमा चिन्ता लिनु आवश्यक छैन् । यो सबै बच्चाको हुर्कने प्रक्रिया हो र यसलाई सामान्य रुपमा हेर्नुपर्छ ।
के कारण तौल घटबढ हुन्छ ?
जब बच्चा बामे सर्न थाल्छन् (७ देखि १० महिना) उनीहरुको तौल थोरै घट्न सक्छ । बच्चामा फ्याटी टिस्यु र मेटाबोलिजमले सुरुमा तौल बढेपनि स्वतपछि बिस्तारै घट्छ । तसर्थ, बामे सर्दा थोरै तौल घट्नु स्वभाविक हो, तौल घट्दैमा चिन्तित हुनु पर्दैन । सामान्य बिरामी हुँदा वा प्रयाप्त नखाँदा पनि तौल घट्छ । तर निरन्तर तौल घट्यो भने वाल रोग विज्ञको सुझाब लिनुपर्छ ।
कस्तो अवस्थामा चिकित्सकको सल्लाह लिने ?
यदि बच्चाको तौल निरन्तर घट्छ वा हुनुपर्ने तौल पुग्दैन भने बाल चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्छ । प्रारम्भिक समयमा नै बच्चाको तौल घटेमा र कमजोर हुन थालेमा चिकित्सकीय उपचार गर्न ढिलाई नगर्नुहोस । किनकी कुपोषणले पनि बच्चाको तौल घट्छ ।
खुवाईको तरिकाले पनि बच्चाको तौल पनि घटबढ हुन्छ । भोकाउँदा समयमा दुध खान पाएनन् भने पनि तौल घट्छ । त्यस्तै जतिखेर पनि आमाको दुध चुस्ने बच्चाको तौल तुलनात्मक रुपमा बढी हुन्छ । बच्चा दुब्लाउदै गएपछि तपाईले उच्च क्यालोरियुक्त खानेकुरा खुवाउनु भयो भने पनि उनीहरुको तौल बढ्ने र घट्ने भइरहन्छ । केही बच्चाहरु सन्तुष्ट भएपछि मात्र खान खोज्ने भएकोले उनीहरुलाई खुसी पार्न सक्नुपर्छ।